B2B: Sida Loo Sameeyo Jiilka Hogaaminta Warbaahinta Bulshada Waxtarka Leh | Martech Zone
Baraha bulshada waa hab aad u wanaagsan abuuraan gaadiid iyo ka warqabka summada, laakiin waxa laga yaabaa inay aad u adag tahay soo saarista hogaanka B2B. Waa maxay sababta warbaahinta bulshadu aysan waxtar ugu lahayn u adeegida mabaadiida iibka ee B2B iyo sida looga gudbo caqabadaas? Aan isku dayno inaan ogaano!
Caqabadaha Hormoodka ah ee Warbaahinta Bulshada
Waxaa jira laba sababood oo waaweyn oo ay shabakadaha bulshadu ku adagtahay in ay isu rogaan kanaalada macdanta rasaasta:
Suuqgeynta warbaahinta bulshada ayaa hakad galeysa – Si kasta oo aad u beegsato istiraatijiyaddaada baraha bulshada, baraha bulshadu caadiyan maaha goobta ay dadku ku ganacsadaan. Waxay baadhayaan quudkooda warbaahinta bulshada si ay ula qabsadaan asxaabta, qoyska iyo shaqaalihii hore. Waxa laga yaabaa inay raadiyaan carqaladaynta hab-socodka shaqada oo ay daawadaan muuqaalo madadaalo leh ama xusuus-qor. Xiriirintaada warbaahinta bulshada ayaa joojiya habka. Xitaa haddii aad si fiican u beegsato wararkaas oo aad gaadho dhagaystayaasha la doonayo, inta badan maaha wakhtiga ku habboon rajadaada.
Safarrada iibsiga ee aadka u adag - Marka ay timaado B2B, suuqleyda iyo maareeyayaasha iibka waa inay la tacaalaan cutubyada go'aan qaadashada, dhowr qof oo laga yaabo inay go'aan ka gaaraan haddii alaabtaadu tahay wax ay rabaan inay maalgashadaan .), Maareeyayaasha (maamulaha suuqgeynta, maareeyaha horumarinta alaabta, maareeyaha taageerada macaamiisha, iwm.) iyo sidoo kale isticmaalaha ugu dambeeya (qofka ku jiri doona dhamaadka hore isagoo isticmaalaya alaabtaada, sida falanqeeyaha SEO ama kooxda wacyigelinta xiriirka ). Natiijo ahaan, safarka wax iibsiga wuxuu qaadan karaa toddobaadyo iyo bilo inta bixintaadu ka socoto waax ilaa waax. Ku dhawaad ​​marnaba ma jiraan wax gadashada oo si fiican uga shaqeeya suuq-geynta warbaahinta bulshada. Waxaad u baahan tahay meelo badan oo taabashada ah si aad u xasuusiso rajadaada naftaada iyo alaabtaada.
Sidee Looga Abuuri Karaa Hogaaminta Baraha Bulshada?
Hase yeeshe, warbaahinta bulshadu waxay weli si aad u wanaagsan u shaqayn kartaa si ay labaduba u dhaliyaan hoggaan una taageeraan dadaalkaaga jiilka kale ee hogaanka. Waa kan sida.
1. Samee habkaaga dhageysiga warbaahinta bulshada
La socodka warbaahinta bulshada ayaa aasaas u ah abuurista marin iib oo wax ku ool ah. Waxaad doonaysaa inaad awood u yeelato inaad halkaas joogto si aad uga qaybgasho doodaha khuseeya oo aad uga jawaabto hadallada warbaahinta bulshada. Waxay sidoo kale kaa caawin doontaa inaad fahamto tabaha jiilka hogaaminta tartamayaashaada iyo sidoo kale inaad si fiican ula xiriirto dhagaystayaasha aad beegsaneyso.
Awariyo waxay ku siinaysaa xal dhegaysi bulsho oo dhamaystiran oo aad u isticmaali karto si aad ula socoto summadaada, magacyada tartamayaashaada, doodaha dhagaystayaasha aad beegsanayso, iwm. Adigoo isticmaalaya Awario's search boolean waxa aad la socon kartaa wax kasta. Intaa waxaa dheer, Awario waxay bixisaa qaab jiilka hogaanka waxtarka leh oo kaa caawinaya inaad qabsato wada sheekaysi si fudud u dhalin kara beddelaad.
Marka laga soo tago dhegeysiga warbaahinta bulshada, tixgeli inaad la socotid muuqaallada warbaahinta bulshada ee muhiimka ah ee isbeddellada sawirka bio iyo profile: Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad waqti ku siiso meelaha taabashadaada si ka sii wanaagsan marka rajadaada la horumariyo, u dabaaldegto guul weyn, ama suuq geyso shay muhiim ah, sida buug cusub ama dhacdo.
Sawir -qaadis waa hab fiican oo lagu dejiyo kormeerka noocan oo kale ah oo kuu oggolaanaya inaad ka warqabto isbeddelada socda Instagram, Facebook, ama xataa boggaga sirta ah lagu ilaaliyo:
2. Samee bogga degitaanka warbaahinta bulshada (ama goobta)
Waxaa jira wax badan oo laga sheego bogga degitaanka ee loo maleynayo inuu u rogayo kuwa ku dhuunta warbaahinta bulshada inay noqdaan hoggaan, mana jirto talooyinka halkan ku habboon. Waa inaad tijaabisaa oo aad tijaabisaa A/B. Waxaa jira mabaadi'da aasaasiga ah:
Waa in, sida cad, ay noqoto mid saaxiibtinimo ku leh moobilka maadaama dadka intooda badan ay ka helaan warbaahinta bulshada aaladaha mobilada
Waa inay si degdeg ah u rartaa, oo u adeega qaybta ugu muhiimsan marka hore si aysan u lumin dadka isticmaala baraha bulshada
Waa inay lahaataa caddayn bulsheed oo cad, oo ay door bidayaan kuwa si wanaagsan loo aqoonsan yahay. Reviews aad ayey muhiim ugu yihiin beddelka gaadiidka warbaahinta bulshada
Ugu dambayntii, waa in ay isla markiiba ka qaybgelisaa booqdayaashaada, iyada oo meesha ka saaraysa wixii tallaabooyin dheeraad ah.
Fikrad ahaan, waxaad dooneysaa booqdayaasha boggaga inay sameeyaan ficil degdeg ah isla markaaba.
Ku martiqaadida booqdayaasha boggaga si ay u doortaan wakhti go'an demo bilaash ah waa fikrad aad u fiican sababtoo ah taasi waxay meesha ka saaraysaa qadarka emails ee soo noqnoqda iyo soo gaabinaya dhuunta iibka. Magacaabid waa app anfacaya oo awood u siinaya rajadaada inay jadwal u qabtaan wicitaanka oo ay ku daraan jadwalkooda hal gujin oo jiirka ah.
Fikrad kale waa in ku darso sheeko toos ah ikhtiyaarka ah oo ah hab fiican oo lagu hawlgelinayo habka iibka isla markaaba.
Xaaladaha qaarkood, bixinta wax bilaash ah isla markaaba waa habka kaliya ee lagu mashquuliyo taraafikadaada warbaahinta bulshada. Ma aha fikrad xun in la helo iyaga inay ku biiraan webinar bilaash ah. Waxaa jira kala duwanaansho aad u weyn oo ah warbaahinta bulshada-saaxiibtinimo dhufto ee webinar oo kuu ogolaanaya inaad si toos ah ugu socoto warbaahinta bulshada.
Dhuumaha dhuunta qaarkeed, waxa kale oo ay macno samaynaysaa in la sameeyo goob gaar ah oo ka duwanaan doonta summadaada ugu muhiimsan. Tusaale ahaan, waxaad samayn kartaa warsidaha niche ee aadka loo beegsaday ama waxaad samayn kartaa gole niche oo samee tallaabada ugu horreysa ee dhuumahaaga.
Xaaladdan oo kale, abuurista degel gaar ah ayaa macno qumman leh. Looma baahna inaad bixiso ton magac domain, waad isticmaali kartaa Magacaabid si dhakhso ah loo helo domain aan qaali ahayn oo ay fududahay in la sumadeeyo.
3. Hubi in wararkaaga (ama xayaysiisyadaadu) ay dhab ahaantii soo jiidanayaan
Sida cad, ma jirto hal cunto oo kaliya oo lagu abuurayo nuxurka warbaahinta bulshada ee waxtarka leh.
Laakiin halkan waxaa ah dhowr fikrado oo aad ku tijaabin karto:
Isticmaal sawirro iyo muuqaalo badan: Kuwaani waxay sidoo kale ka caawin doonaan ganacsigaaga muuqaalkaaga dabiiciga ah iyada oo loo marayo darajooyinka sawirka iyo carousels video
Abuur ra'yi ururin ka dibna ku shaaci natiijooyinkaaga boostada dabagalka ah
Tag dadka saamaynta leh ee aad ku sheegtay macluumaadkaaga si aad uga hesho caawimo kor u qaadistiisa
Weydii su'aalo badan
Text Optimizer waa hab fiican oo lagu helo su'aalo xiiso leh oo lagu weydiiyo baraha bulshada oo aad ka qaybgeliso in badan oo dhagaystayaashaada ah:
Halkan waxaa ah sidoo kale hage weyn oo ku saabsan abuurista a Istaraatiijiyada nuxurka warbaahinta bulshada.
4. Si fiican u waqti cusbooneysiintaada ama xayeysiisyadaada
Waqtigu waa wax kasta oo ku jira suuq-geynta warbaahinta bulshada sababtoo ah waxay kuu ogolaaneysaa inaad meesha ka saarto ifafaalaha joojinta ee aan horay uga hadalnay.
Tusaalooyinka qaar ee wakhtiga wanaagsan waxaa ka mid ah:
Dhacdo niche soo socota oo qof kastaa ka hadlayo
Isbeddel ama isbeddel dhaqaale oo ka dhigay alaabtaada mid faa'iido gaar ah leh (ka fikir Zoom u adeega xayeysiisyada shaqada fog inta lagu jiro xidhitaanka Covid)
Xiliga (tusaale xilli cashuureedka soo socda), iwm.
Isbeddellada Google waa hab wanaagsan oo lagu saadaaliyo isbeddellada xilliyeedka. Waxa kale oo lagu xaddidi karaa degaan gaar ah:
5. Si fiican u qor hoggaankaas
In la habeeyo waa furaha marka ay timaado jiilka hogaanka: Waxaad u baahan tahay inaad si cad u ogaato cidda aad hore ula xiriirtay, waxa meelaha la taaban karo ay ahaayeen ilaa hadda, iyo sida uu u eg yahay DMU kasta (qaybta go'aan qaadashada)
Tani waa meesha xalka CRM ee wanaagsan uu ka soo galo ciyaarta.
Halkan waxaa ah isbarbardhig adag oo ah goobaha CRM ee waaweyn si aad wax uga doorato. Raadi xal software ah oo bixiya habka maaraynta dhuumaha iibka adag oo abuuraya muuqaalada hogaanka oo faahfaahsan.
6. Caawinaad ka raadso kuwa saameeya
Suuqgeynta saamaynta leh ayaa wax weyn ku soo kordhinaysa jiilka rasaasta ay horseed ka tahay warbaahinta bulshada sababtoo ah dadku waxay aaminsan yihiin dadka. Dulqaadashada dhawr-soo-saareyaal niche ayaa kaa caawin doona inaad abuurto xoogaa kalsooni ah. Waxa kale oo ay kaa caawin doontaa inaad hesho qaar ka mid ah faallooyinka iyo markhaatiyaasha qiimaha leh si aad ugu isticmaasho boggaga degitaanka warbaahinta bulshada.
Waxaa jira hage faahfaahsan oo ku saabsan sida loo ku guulaysta saamaynta baraha bulshada iyaga oo aan kafaala qaadin.
Awariyo Waxay ku siinaysaa qalab suuq-geyneed awood leh oo kuu oggolaanaya inaad aqoonsato dadka caanka ah ee caanka ah ee ku jira niche-gaaga iyo habka ugu wanaagsan ee loo wajaho:
7. Ka qayb geli kooxdaada oo dhan hawsha
Suuqgeynta warbaahinta bulshada waxaa ku jira dad ka badan kaliya kooxdaada iibka. Waxaad u baahan tahay inaad haysato maareeyayaasha warbaahinta bulshada dadaalkaaga sababtoo ah waa kuwa ku lug leh nidaamka waana inaad mar walba soo dhaweysaa jawaab celinta kooxdaada taageerada macaamiisha sababtoo ah waxay safka hore kaga jiraan la macaamilka macaamiishaada hadda.
Xitaa kooxdaada horumarinta alaabta waxay u baahan yihiin inay ku lug yeeshaan sababtoo ah warbaahinta bulshada ayaa ah hab fiican oo lagu soo saaro jawaab celinta wakhtiga dhabta ah ee qalabkaaga.
Markaa ku haynta shirkadaada oo dhan ku lug lahaanshiyaha geeddi-socodku waxa ay ka faa’iidaysan doontaa cid kasta oo kaa caawin doonta inaad xataa natiijooyin la taaban karo ka hesho dadaalkaaga. Haddii aadan hubin sida loo sameeyo taas, qaado kan Imtixaanka Isgaadhsiinta Midaysan si loo ogaado sida loo dejiyo habka.
8. Qaybi oo dib u suuqgeyn xayaysiisyadaada warbaahinta bulshada
Ugu dambeyntiina, warbaahinta bulshada ayaa ah kaabis ku habboon dhammaan dadaalladaaga jiilka hoggaanka sababtoo ah waxaad dib u beegsan kartaa booqdayaasha boggaaga iyadoo lagu saleynayo ka-qaybgalkoodii hore ee goobta.
Halkaa marka ay marayso dhammaan aaladaha warbaahinta bulshada ee waaweyn waxa ay bixiyaan sifo suuqgeyn ah:
Facebook (iyo Instagram): Waxaad dib u beegsan kartaa xayeysiisyadaada dadka soo booqday goobtaada, beddelay, ka tagay baabuurtooda wax iibsiga, iwm.
Twitter: Waxaad dib u suuq-geyn kartaa isticmaalayaasha ku arkay ama kula macaamilay Twitter
LinkedIn: Waxaad dib u bar-tilmaameedsan kartaa xayaysiisyadaada mareegaha, xayaysiisyada fiidyowga, foomamka Gen- Lead ama dhawaan Dhacdada LinkedIn.
Suuqgeynta warbaahinta bulshada waxay leedahay hal caqabad oo weyn si aad ula qabsato: Waa inaad had iyo jeer halkaas joogtaa si aad u aragto natiijooyin. Isla marka aad joogsato, nambarada rasaasta ayaa bilaabi doona taangiyada. Markaa ma jiraan wax miisaan halkan ah: Waa geedi socod joogto ah.
Akhbaarta wanaagsan ayaa ah, adeegsiga aaladaha iyo tillaabooyinka kore waxaad awoodi doontaa inaad dejiso istiraatiijiyad abuur hogaamineed oo wax ku ool ah si aad uga faa'ideysato taraafikadaada warbaahinta bulshada. Nasiib wanaagsan!
Daah-: Martech Zone waxay u isticmaalayaan xiriirintooda kuxiran alaabta qaar ee maqaalkan.
Tags: caariob2bsafarka iibsadayaasha b2bjiilka hogaaminta b2bCRMdhufto ee crmisbedelka googlesuuqgeynta suuqgeyntakafaalaqaadyada saamaynta lehSaameeyayaashadoorashada dalkadoorashadaqaybintaxayeysiinta bulshadadhageysiga bulshadawarbaahinta bulshadakala qaybinta xayeysiiska warbaahinta bulshadaIstaraatiijiyada nuxurka warbaahinta bulshadabogga soo degitaanka warbaahinta bulshadajiilka warbaahinta bulshadadhageysiga warbaahinta bulshadakala qaybinta warbaahinta bulshadakafaalashosaamayn ku taghagaajinta qoraalkaTwitterisgaarsiinta mideysanvideo carousel xayeysiissawiridyoutube